Hlola iSydney, e-Australia - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni ye World Tourism Portal
Ipaki Kazwelonke Yase-Arusha
IMikumi National Park
Ipaki Yesizwe YaseRuaha
ISerengeti National Park
I-Great Wall yaseChina
I-Great Barrier Reef
Ukuya kaKhisimusi lapho
Lapho ungaya khona unyaka omusha
Lapho ungaya khona ngeHanukkah
Amathikithi Ebhanoyi Lencwadi
Amahhotela amabhuku namahostela
Ukuqashwa Kwezimoto - Ukuqashwa kweScooter / ATV - Ukuqashwa kwamabhayisekili
Izitimela namabhasi eYurophu
Amathikithi, Uhambo Nemisebenzi Yomhlaba Wonke
Ama-Book Yacht nama-Cruise
Amathikithi wesitimela okuhambela amazwe aseRussia nawaseCIS
Izinto Ezikahle kakhulu Zase-Asia Zokwenza, Uhambo, Imisebenzi namathikithi
Amathikithi ezemidlalo, amakhonsathi, imikhosi namathikithi emidlalo yaseshashalazini eMelika
Amathikithi ezitimela, amabhasi, izikebhe, amashadi eSoutheast Asia
Thenga ikhadi le-SIM elingavuleki lomhlaba - amanani ashibhile
Ukubambezeleka noma Ukukhanselwa Kwebhanoyi Lendiza
I-Africa Video Travel Guides
Amazwe Ase-America Travel Guides
I-Asia Video Travel Guides
I-Europe Video Travel Guides
Hlola iSydney, e-Australia
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eSydney, e-Australia.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eSydney
Bukela ividiyo ekhuluma ngoSydney
Okuthunyelwe kwe-Instagram okuvela kwabanye abasebenzisi
Bhuka uhambo lwakho
Amathikithi okuhlangenwe nakho okumangazayo
Bheka iSydney, eyaziwa nangokuthi yi-Harbour City. Yidolobha elikhulu kunawo wonke, elidala kakhulu futhi elinendawo yonke kulo Australia unedumela elihle njengenye yamadolobha amahle kakhulu futhi athandeka emhlabeni.
Igcwele umlando, imvelo, isiko, ubuciko, imfashini, ukudlela, ukudizayina, ukusetha kukaSydney eduze kwamamayela osogwini lolwandle namabhishi anesihlabathi. Ukufika isikhathi eside kuholele ekutheni idolobha lelo lidume njengelinye lamadolobha ahlukahluke kakhulu kwezenkambiso nokuziphatha e-Australia nasezweni. Leli dolobha lisekhaya naseSydney Opera House neSydney Harridge Bridge, izakhiwo ezimbili ezithandekayo kulomhlaba.
ISydney idolobha elikhulu lomhlaba wonke futhi elinye lamadolobha abaluleke kakhulu kwezimali e-Asia-Pacific. Leli dolobha lizungezwe imvelo namapaki ezwe lonke, adlulela ezindaweni ezinamadolobhana nangakwesokudla ogwini lwetheku. Kungashiwo ukuthi ubushiqela bebanga buyehlile ezikhathini ezedlule. ISydney manje indiza nje yokuqhela kwezinye zezomnotho ezikhula ngokushesha futhi ezinkulu emhlabeni. Lokhu kwandise ukubukwa kwedolobha, ukuthandwa ngendawo yalo ehlanzekile nesimo sezulu esihle.
Obunye ubufakazi buveza ukuthi abantu bahlala endaweni yase-Australia okwakuzoba yiSydney cishe eminyakeni eyi-50,000 ngaphambi kokuba kufike izifiki zokuqala zaseYurophu. Ukuthi labo bantu bokuqala bafika kanjani eSydney kusengumuntu ongaziwa.
Namuhla, iSydney iyikhaya “lamaSidvesives” angaphezu kwezigidi ezine. Ibhekwa njengelinye lamadolobha ahlukahlukene kunawo wonke emhlabeni, enamaphesenti angaphezu kwangu-40% wabantu abavela ngaphandle kwase-Australia. Isimo sezulu esihle, izakhiwo ezithandekayo, amabhishi amahle nezilwane zasendle ezixakile konke kuhlangane ukusiza ukwenza iSydney enye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi emhlabeni.
ISydney ihlala kahle kubahambi abahambela noma isiphi isikhathi sonyaka. Idolobha lithokozela ngaphezu kwezinsuku ezingama-300 ezinelanga unyaka nonyaka.
Isakhiwo iQueen Victoria Building (esifingqiwe i-QVB) siyisibonelo esihle kakhulu sethonya lamakoloni aseBrithani ekwakhiweni kwezakhiwo e-Australia
Isibhakabhaka saseSydney sikhulu futhi siyabonakala kakhulu. ISydney nayo inezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zesitayela sokwakha sanamuhla nesidala. Basuka ezakhiweni ezilula zikaFrancis Greenway eGeorgia baya eJorn Utzon's Spressionist Sydney Opera House. ISydney nayo inesibalo esikhulu sezakhiwo zeVictorian, njengeSydney Town Hall kanye neQueen Victoria Building. Okubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwezakhiwo kube yiSydney Opera House, iSydney Harbour Bridge, phakathi kwabanye abaningi. Ama-skyscrapers eSydney nawo makhulu futhi anamuhla. ISydney tower ikhuphuka ngaphezu kwayo yonke indawo yesibhakabhaka saseSydney.
Uthando lukaSydney ukujaha amahhashi. Omunye umjaho omkhulu phakathi Australia, I-Golden Slipper, ifakwa njalo ngoMashi.
Isikhumulo sezindiza iSydney Kingsford Smith International isikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke e-Australia kanye nesango elikhulu eliya kulo Australia.
Uhlelo lokuthuthwa komphakathi luqukethe ujantshi wesitimela, ibhasi, isikebhe nesitimela esilula. Kuhlanganiswe, bangakuthola noma yikuphi endaweni yedolobha elikhulu.
Kunokukhethwa okuningi kokuqashwa kwezimoto kusuka eSydney Airport naseSydney CBD. Abahlinzeki ngokuqashisa ngokubabazekayo abanamadeski esikhumulweni sezindiza nezimoto ezipakwe ibanga lokuhamba lesikhumulo sezindiza yilezi: Avis, Budget, Europcar, Hertz, neRedspot. Kukhona futhi izinketho eziningi zokuqashwa kwezimoto eSydney ezingatholakali endaweni eseduze nesikhumulo sezindiza, kodwa zinikela ngamanani entengo wokuncintisana: i-Apex Car Rentals, Bayswater Car Rental, kanye ne-East Coast Car Rentals.
Uma useqenjini, ungadinga ukuqasha ibinibus. Ama-minibuses anezinketho ze-8, 12 nez 21. Amaminithi we-8 kanye nama-12 esihlalo sangaphansi angaqhutshwa nelayisense elijwayelekile lokushayela. Iningi lezinkampani zamabhasi anikezela ngokudiliza bese liyeka esikhumulweni sezindiza iSydney lisebenzisa insizakalo “yokuhlangana nokubingelela”.
Uma ungumjaho wokuhamba ngebhayisekili ofanelekayo futhi onolwazi, ojwayele ukugibela imigwaqo enendlela eziningi ngethrafikhi esindayo, vele ungene ngebhasikidi lakho. Abahamba ngebhayisikile bavunyelwe cishe yonke indawo emigwaqweni yaseSydney, ngaphandle kweminye yemigwaqo enguthelawayeka lapho izimpawu zamabhayisekili zivame ukukuyisa kwenye indlela.
ISydney ngenye yamadolobha acela izivakashi ukuthi ziklame ukubona kwazo ngokwezifiso. Ngokungafani namadolobha amaningi emhlabeni wonke, iSydney akuyona idolobha lapho abantu beza ukubona "X" noma ulwazi lwe- "Y." Lokho kungenxa yokuthi iSydney iyikhaya leminyuziyamu, amathofi nezindawo zokudlela, izindawo zokuthenga nezomlando. Ingabhekwa ngezinyawo nangemanzini. Ngenkathi yonke iSydney inokubuka okufanele ukukuvakashela, iningi lenkazimulo yayo ligcinwe eCity Center. Lapha, izivakashi zingakhetha ukuqala ukuvakasha kwabo ngokuhamba emuva e-The Rocks, indawo yokuqala yokuhlala yaseYurophu e-Australia.
Izitolo eziningi zizokwamukela amakhadi wesikweletu e-VISA / Mastercard - ngokuvamile ezinye izitolo ezincane 'ziyimali kuphela'. Kodwa-ke, akujwayelekile ukuthi ezinye izitolo ezincane zingamukeli izinkokhelo zamakhadi ngemali encane, noma ukukhokhisa imali engaphezulu. I-American Express ngokuvamile yamukelwa kuphela ezitolo ezinkulu.
Izitolo ezinkulu zoMnyango nezitolo ezikhethekile zivula i-9am bese zivala i-6pm, zihlala zivulekile kuze kube yi9pm ngoLwesine. NgeSonto balindele ukuthi bavule cishe i-10am ezindaweni ezingaphansi kwedolobha, nasezungezeni i-11am enkabeni yedolobha, bese bevala e5pm. Kunezindawo ezimbalwa lapho uzothola khona izitolo zivulwa kungekudala, njengeDarling Harbour elivulwa kuze kube yi9pm njalo phakathi nesonto.
Izitolo ezinkulu zizovulwa kusuka ku-6am kuze kube phakathi kwamabili, kepha eziningi zivulwa ngokuhamba kwesikhathi, ezinye zize amahora we-24.
Izitolo eziningi ezilula, izindawo zokudlela ezisheshayo kanye neziteshi zikaphethiloli ngaphakathi kwendawo yedolobha laseSydney amahora amahora we-24 ngosuku.
Amabhange ajwayele ukuvulwa phakathi nezinsuku phakathi nesonto, bese kuvulwa kuphela igatsha ngezikhathi ezithile ngoMgqibelo ekuseni. Ama-ejenti wokuhamba (angafaki ama-ejenti wokubhuka ezindaweni zabavakashi) kuvalwa ngamaSonto.
Yini ongayithenga eSydney
Inombolo yezimo eziphuthumayo e-Australia yi-000, lapho kusetshenzelwa khona i-ambulensi, umnyango wezomlilo namaphoyisa.
IBondi Beach - Ibhishi lase-Australia elinezimpawu ezinhle kakhulu
Into enkulu okufanele uyikhumbule lapho ubhukuda kunoma yiluphi uhlobo lolwandle lwaseSydney ukubhukuda phakathi kwamatshe amafushane aphuzi abomvu. Lawa mafulegi abekwe ngabaphathi bezempilo futhi akhombisa indawo ephephe kunazo zonke ukubhukuda ebhishi kude nemisinga eyingozi.
Amabhishi olwandle lwaseSydney onke anamanethi amane oshaka asezungeza amamitha we-100 olwandle, futhi avikelelwa njalo ngomoya wabasakazi. I-alamu eshisayo izokhala uma kukhona abonwa, futhi kufanele uphume emanzini.
Kunenombolo yokuhamba okuhle kosuku olulodwa noma ezimbili ukusuka eSydney:
Shayela uwele umugqa womgwaqo iBell's Road udlula ezintabeni iBlue Mountain uye kumaThafa aseNtshonalanga. Thenga umkhiqizo (ama-aphula, ithini lamapheya, ama-chestnuts namajikijolo) kubathengisi bezithelo ezihlala eceleni komgwaqo uma ushayela ekwindla. Imbalwa yalezi zithelo futhi inikezela eyakho. Amadolobhakazi okuzoma ngawo afaka iLithgow, esesithendeni sezintaba; IBathurst, ikhaya eliseMount Panorama motor racetrack, kanye ne-Orange (amahora angu-3 ukusuka eSydney), idolobha elihle elihle elinendawo enkulu (ebandayo) yesifunda newayini nezindawo zokudlela ezimbalwa ezimnandi ngabapheki abadumile, futhi esheshayo iba yi-new-and- esifundeni sokudla saseNew South Wales ukuze kukhuphuke isigodi saseHunter.
Hamba uye endaweni eyihlane ye-Blue Mountain. Kunezindlela eziningi zokuhamba kosuku oluhle endaweni yaseKatoomba, noma ungavakashela amaJenolan Cave. Lokhu kutholakala kalula kunethiwekhi ye-NSW TrainLink eKatoomba.
I-Royal National Park, eningizimu yeSydney futhi efinyeleleka ngesitimela ine-1 enhle ekuhambeni kwezinsuku ze-2.
INewnes Glen eWollemi National Park.
IKanangra Boyd National Park.
Thatha uhambo lwe-Hunter Valley wineries.
I-Wollongong idolobha elincane elithandekayo eningizimu yeSydney, etholakala ngokushayela phansi umgwaqo onguthelawayeka we-F6 noma uthathe isitimela sehora ngalinye se-NSW TrainLink.
Yibhekisa eGosford noma kuWoy Woy ukuthola amanye amabhishi athule, kodwa amnandi. Womabili la ma-Astown ayatholakala yiCentral Coast neNewcastle NSW TrainLink.
Yibhekisa edolobheni lesifunda saseNewcastle yi-NSW TrainLink futhi uthathe ezinye zezakhiwo ezingama-Victoria kanye namabhishi amadolobha amahle.
Ngeminye imininingwane sicela uvakashele iwebhusayithi esemthethweni kahulumeni:
I-Instagram ayibuyisanga i-200.
Amathikithi Ebhanoyi - Amahhotela - Ukuqashwa Kwezimoto - Amatekisi - Iminyuziyamu kanye Nemisebenzi - Impahla yokuhamba - Amathikithi wesitimela - Izinsiza zokuhamba
Uma ufuna senze i-Blog Post mayelana nendawo oyithandayo,
sicela usithumele umyalezo I-FaceBook
futhi sizozama ukungeza kungekudala
Amathiphu Asetshenziswayo Wohambo
Amathiphu Ewusizo Wohambo Qiniseka ukuthi ufunda lezi zeluleko zokuhamba ngaphambi kokuhamba. Ukuhamba kugcwele izinqumo ezinkulu - njengokuthi ngivakashelwa yiliphi izwe, ukuthi uzosebenzisa malini nokuthi uzoyeka nini ukulinda bese ekugcineni wenze leso sinqumo esibaluleke kakhulu sokuthatha amathikithi. Nawa amanye amathiphu alula abushelelezi ngendlela elandelayo […]
o Zonke izinguqulo zenziwe kusuka kwimishini yezobunhloli obungelona olwangempela. Sicela uxole noma yimaphi amaphutha.
o Le sayithi iqukethe izixhumanisi ezixhumene nazo, ngakho-ke singathatha ikhomishini uma uthenga insizakalo KUNGEKHO izindleko ezengeziwe kuwe.
o Asinankinga nokuqukethwe kumawebhusayithi angaphandle.
Imigomo NemibandelaIvula kuthebhu entsha
Inqubomgomo yobumfihloIvula kuthebhu entsha
Isaziso sobumfihlo se-GDPRIvula kuthebhu entsha
IbalazweIvula kuthebhu entsha
Imibuzo Evame UkubuzwaIvula kuthebhu entsha
Ivula kuthebhu entsha
Email:info@worldtourismportal.comIvula kuhlelo lwakho lokusebenza
I-copyright 2019 - 2020 | World Tourism Portal | Wonke Amalungelo Agodliwe
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi adingekayo-kuphela ukuthuthukisa umuzwa wakho. Ngokuqhubeka nokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavumelana nalokhu, kepha ungaphuma uma ufisa. "Imigomo nemibandela" | "Inqubomgomo yobumfihlo" Izilungiselelo zekhukhiYamukelaYenqaba
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa umuzwa wakho ngenkathi uzulazula ngewebhusayithi. Amakhukhi adingekayo abalulekile ukuze iwebhusayithi isebenze kahle. Lesi sigaba sifaka amakhukhi aqinisekisa ukusebenza okuyisisekelo kanye nezici zokuphepha zewebhusayithi. Lawo makhukhi awalugcini ulwazi lomuntu siqu.